လက်ရှိတွင် Hebei ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားသည့်ရောဂါကူးစက်မှုသည်လွန်သွားပြီးလူတို့သည်ပုံမှန်နေ့စဉ်ဘဝသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။ သို့သော်အာမခံရန်အတွက်အချို့သောဒေသများအနေဖြင့် Covid-19 အတွက် ၇ ရက်သို့မဟုတ် ၁၄ ရက်စာမေးပွဲစစ်ဆေးမှုလက်မှတ်ကိုပြသရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လုပ်ငန်းကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ မင်းကိုကြိုဆိုပါတယ်
၀ န်ကြီးချုပ် Li Keqiang သည်Councilပြီလ ၇ ရက်နေ့တွင်နိုင်ငံတော်ကောင်စီ၏အလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးကိုဥက္ကch္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ၁၂၇ ကြိမ်မြောက် Canton Fair ကိုဇွန်လလယ်မှနှောင်းပိုင်းအထိအွန်လိုင်းတွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ Canton Fair သည်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာရန်အစောဆုံးပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည် ...
1. ပထမ ဦး စွာကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ကုန် name ကိုပြောပါသို့မဟုတ်သင်၌အမည်မရှိလျှင်သင် pic ပေးပို့နိုင်သည်, သို့မဟုတ်သင်လိုအပ်သောထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ 2. သင်လိုအပ်သောထုတ်ကုန်များအတွက်အသေးစိတ်အရွယ်အစားပေးပါ? ဝါယာကြိုးအဆိုပါအထူ: အဝါယာကြိုး gauge / အချင်း; အထုပ် - အလေးချိန်၊ တစ်ကီလိုဂရမ်ဘယ်ကီလိုဂရမ် ...
ယခု Corona-virus သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ပျံ့နှံ့နေသည်။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏တိုင်းပြည်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ဖောက်သည်များထံမှသတင်းများစွာရရှိသည်။ သင်တို့အချို့သည်ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပူကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ အတိတ်ကာလ၌, သငျသညျယခုကြုံနေရနေကြသည်ကဲ့သို့ငါတို့ခံစားခဲ့ရသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ ab နှင့်အတူအချို့သောအတွေ့အကြုံကိုမျှဝေချင်တယ် ...